Wasaaradda arrimaha dibadda oo sheegtay in 273 kenyaan ah ay ku jiraan xabsiyada dalalka kale ee caalamka – The Voice of Northeastern Kenya
Wasaaradda arrimaha dibadda oo sheegtay in 273 kenyaan ah ay ku jiraan xabsiyada dalalka kale ee caalamka
Star FM October 3, 2018
Wasiiradda wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Dr. Monica Juma ayaa baarlamaanka u sheegtay in shacabka kenyaanka ah ee ku jira xabsiyada wadamada kale ee dunida ay tiradoodu tahay ugu yaraan 273 qof.
Arrintan ayay shaaca kaga qaaday dokumeenti ay u gudbisay guddiga gaashandhigga iyo xiriirka caalamiga ee golaha qaran ee sharci dejinta.
Dr. Juma ayaa hoosta ka xariiqday in tirada ugu badan maxaabiistaasi oo ah 79 qof ay ku xiranyihiin wadanka dariska ah ee Tanzania.
Mr Don Bosco Gichana ayaa ka mid ahaa kenyaanka lagu xiray Tanzania hasa ahaate guddoomiyaha baarlamaanka u qaabilsan xiriirka caalamiga ahna mudanaha laga soo doortay degaanka koonfurta Kajiado Katoo ole Metito ayaa sheegay in la soo siidaayay 6 sano kadib.
Waxaa uu Mr. Metito intaasi ku daray Mr. Bosco uu xuriyadiisa dib u helay kadib markii uu bixiyay ganaax lacageed oo dhan 13.2 milyan oo shilin.
Dr. Juma ayaa sheegtay in dowlada aysan u suurtagaleyinin inay dhammaan maxaabiistaasi ka caawiso dhanka sharciga .
Qurbajoogta wadanka u dhashay ayay ugu baaqday inay iska diiwangeliyaan safaaradaha Kenya ay ku leedahay dalalka kale si ay u helaan adeegyada muhiimka ah.
Dr .Juma ayaa xubnaha guddigaasi u ballanqaday inay muddo 14 maalmood ah ku soo gudbin doonto warbixin dhameystiran oo ku aaddan kenyaanka ku dhibaateysan xabsiyada dunida iyadoo dhanka kale qurbajoogta ku boorisay inay u hoggaansamaan shuruucda looga dhaqmo wadanka ay ku noolyihiin.
Wasiiradda ayaa sido kale sheegtay in 57 maxaabisi Kenyaan ah ay ku jiraan xabsiyada Shiinaha, Ugandha waxaa u xiran 47, Malaysia 25, suudaanta koonfureed 10, Qatar 8,Thailand 7 ,Seychelles 6, Itoobiya iyo Indonesia min 5 , Filibiin, Kuwait, Botswana iyo Pakistan min 3 Togo, Cumman iyo koonfur Afrika min 2 halka Rwanda, Japan, Austria, Brazil, Nepal iyo kuuriyada koonfureed ay xabsiyadooda ku jiraan min hal maxbuus oo Kenyaan ah.
← Madaxweynaha dalka oo sheegay in booliska la isku daray lagu xoojinayo waxqabadka ciidamada
Xoghayaha wasaaradda tacliinta oo mamnuucay fasaxyada la qaato ka hor imtixaanada qaran →
In ka badan 18 qof oo ku dhintay daadad saameeyay iiraan March 25, 2019
Madaxweynaha Jubbaland oo ka hadlay Ujeedka Safarkiisa Muqdisho. March 25, 2019
Injineer Yarisoow oo ka hadlay nidaamka shaqalaysiinta March 25, 2019
Nin dabbaasha aad u yaqaana oo dad badan ku soo badbaadiyay Bura March 25, 2019
Dowladda oo gargaar cunno gaarsiisay ismaamulka Kwale March 25, 2019
Ammaanka deegaanka Ladgera oo la adkeeyay March 25, 2019
Idaacadda Star FM oo la gaarsiiyay ismaamulka Meru March 25, 2019
Wadamada Kenya iyo Rwanda oo saxiixday heshiisyo lagu xoojinayo aqalka sare March 25, 2019
Ruushka oo diyaarado dagaal u diray Venezuela March 25, 2019
Warbixin laga soo saaray faragelintii la sheegay in Ruushka uu ku sameeyay doorashadii Maraykanka March 25, 2019
In ka badan 18 qof oo ku dhintay daadad saameeyay iiraan
Madaxweynaha Jubbaland oo ka hadlay Ujeedka Safarkiisa Muqdisho.
Injineer Yarisoow oo ka hadlay nidaamka shaqalaysiinta
Nin dabbaasha aad u yaqaana oo dad badan ku soo badbaadiyay Bura
Dowladda oo gargaar cunno gaarsiisay ismaamulka Kwale
Ammaanka deegaanka Ladgera oo la adkeeyay
Idaacadda Star FM oo la gaarsiiyay ismaamulka Meru
Wadamada Kenya iyo Rwanda oo saxiixday heshiisyo lagu xoojinayo aqalka sare
Ruushka oo diyaarado dagaal u diray Venezuela
Warbixin laga soo saaray faragelintii la sheegay in Ruushka uu ku sameeyay doorashadii Maraykanka